फोटोशपमा भिडियोहरू कसरी सम्पादन गर्ने: एक सजिलो र द्रुत तरीका क्रिएटिव अनलाइन
फोटोशपमा भिडियोहरू कसरी सम्पादन गर्ने
फोटोशपमा भिडियोहरू सम्पादन गर्ने? तपाईं त्यो सहि पढ्नुहुन्छ, यो उपकरणले हामीलाई मात्र छविहरू सुधार गर्न अनुमति दिँदैन। एक छ संभावनाहरूको दायरा जुन तपाईंले खोज्नु पर्छ.
यदि तपाईंसँग GIF कसरी बनाउने भन्ने धारणा छ भने, यो ट्यूटोरियलले कसरी काम गर्दछ भनेर बुझ्न तपाईंलाई यो धेरै सजिलो हुनेछ। यदि होईन भने चिन्ता नगर्नुहोस् किन यो वास्तवमा छ बुझ्नलाई सजिलो.
1 फोटोशपमा तह लागू गर्नुहोस्
2 एक भिडियो सिर्जना गर्नुहोस्: चरणबद्ध चरण
3 कसरी तहहरू बनाउने
4 अवधि समय
5 भिडियो निर्यात गर्नुहोस्
फोटोशपमा तह लागू गर्नुहोस्
सुरू गर्न, यो बुझ्नको लागि आवश्यक छ कि प्रदर्शन गर्न GIF हामीसँग हाम्रो छवि वा चित्र हुनुपर्दछ बिभिन्न तहहरूमा विभाजितअर्को शब्दमा, प्रत्येक क्रियाहरू वा वस्तु जुन हामी प्रत्येक अनुक्रममा थप्न चाहान्छौं विभिन्न तहहरूमा अवस्थित हुनुपर्दछ।
एक भिडियो सिर्जना गर्नुहोस्: चरणबद्ध चरण
सबै भन्दा पहिले, हामी मुख्य मेनू मा जानु पर्छ र पछ्याउनु पर्छ अर्को मार्ग:
विन्डो - समयरेखा
तल एउटा नयाँ विन्डो देखा पर्नेछ, यो सम्पादन तालिका हो। हामीसँग काम गर्न सक्दछौं समयरेखा o फ्रेम एनिमेसनको रूपमा। पछिल्लो तपाइँको ह्यान्डल गर्न को लागी सजिलो हुनेछ, र कल्पना गर्न को लागी धेरै सजिलो छ।
तहहरू जस्तै, हामी पनि प्रत्येक दृश्य को लागी एक फ्रेम जोड्नुहोस्। बक्स चयनितको साथ, हामी कुन लेयरहरू देखिन लागेको छ भनेर संकेत गर्नेछौं। पर्छ दृश्यता खोल्नुहोस् वा बन्द गर्नुहोस् (आँखा)।
कसरी तहहरू बनाउने
वैकल्पिक, यदि तपाईंले प्रत्येक दृश्य रचना गर्नु पर्छ भने इलस्ट्रेटर प्रयोग गर्नु हो। त्यसोभए हामी प्रत्येक लेयर इमेजको रूपमा थप्नेछौं। तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको आफ्नै कम्पोजिसनको साथ स्टक छविहरू मिलाउनुहोस्। तपाईंसँग ठूलो मौका छ, तपाईंले भर्खरै गर्नु पर्छ विकल्प सोच्नुहोस् र उपकरण को सबै भन्दा बनाउन। एउटा राम्रो विचार सिर्जना गर्नु हो जुन हामी तलको छविमा देख्छौं, फ्लाई, हाम्रा छविहरूको माथि लागू गर्न। पृष्ठभूमि नभएको हुनको लागि हामीले त्यसलाई PNG ढाँचामा निर्यात गर्नु पर्छ।
एक इष्टतम परिणाम प्राप्त गर्न हामीले यस्ता तत्वहरूमा ध्यान दिनै पर्छ अवधि समय प्रत्येक दृश्य को। सामान्यतया हामी सेकेन्डमा आधारित हुन्छौं, हामी एर्रोबाट अवधि संकेत गर्छौं जुन प्रत्येक वर्गको मुनि अवस्थित छ। यदि हामी क्लिक गर्छौं, ठीक सेकेन्डमा स indicate्केत गर्न विन्डो प्रदर्शित हुनेछ। हामी तपाईंलाई दिन सक्छौं समय फरक हरेक दृश्यमा।
हामी पनि गर्न सक्छौं समयलाई परिभाषित गर्नुहोस् जुन हामी कार्य दोहोर्याउन चाहन्छौं। यो सुविधा GIF को अधिक विशिष्ट छ, यद्यपि हामी यसको प्रयोग गर्न सक्दछौं यदि हामी हाम्रो भिडियो लुपमा खेल्न चाहन्छौं भने।
भिडियो निर्यात गर्नुहोस्
फोटोशपमा भिडियो निर्यात गर्न, हामीले निम्न मार्ग अनुसरण गर्नुपर्नेछ:
फाईल - निर्यात - भिडियो व्याख्या ...
जब गुण पर्दा देखा पर्दछ, हामीले विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ जुन फाईलले हाम्रो लागि सिर्जना गर्दछ .mp4 ढाँचा.
यस तरिकाले, हामी गर्न सक्छौं वास्तव मा पेशेवर भिडियो बनाउनुहोस्, संचार र दृश्य जुन हाम्रो परियोजनामा ​​थप थप गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » फोटोशपमा भिडियोहरू कसरी सम्पादन गर्ने
नयाँ कोका-कोला विज्ञापन तपाईं लगभग "सुन्न" सक्नुहुन्छ
प्यारामाउन्टले आलोचकको ब्यारेज प्राप्त गर्न अघि सोनिकलाई पुनः डिजाइन गर्ने निर्णय गर्दछ